Kathmandu24 || 24*7 News In Nepali Language » कोरोना उपचारमा जाने डाक्टरलाई आफन्तले गरे रुँदै बिदाइ
कोरोना उपचारमा जाने डाक्टरलाई आफन्तले गरे रुँदै बिदाइ
बेइजिङ — कोरोना भाइरसको प्रकोप फैलिरहँदा चीनमात्रै होइन पूरा विश्वलाई यसको सन्त्रासले आ तं कि त पारेको छ । बिहीबार विश्व स्वास्थ्य संगठनले ‘विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकटकाल’ घोषणा गरेको छ । वुहानबाट फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण पूरै चीनभर र विश्वका २० भन्दा बढी देशमा देखिएको छ ।
शुक्रबार बिहानसम्म चीनमा कोरोना भाइरसका कारण वुहानको खुला सडकमा एकजना व्यक्तिको श व भेटिएको छ। केही समय अगाडि चीनमा कोरोना भाइरस संक्रमितको उपचारमा खटिएका डाक्टरकै मृ त्यु भएको थियो।
सिन्ह्वा अस्पतालमा कार्यरत ६२ वर्षीय डाक्टर लियाङ वुदोङको कोरोना भाइरसका कारण मृ त्यु भएको थियो। यसैले पनि उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरु भ’य’भि’त देखिएका छन्। कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर मानिएको वुहान सेन्टरमा सयाैंमेडिकल स्वयंसेवकहरु खटाइँदैछ।
प्रकोपको रुप लिइरहँदा संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन चिकित्सकहरुलाई ड’र न’ला’ग्ने कुरै भएन। वुहान सहरमा उपचारका लागि गइरहेका चिकित्सक तथा नर्सका आफन्तहरुले ती सहरमा पठाउनका लागि बिदाइ गर्दा आँ’सु थाम्न सकेनन्।केहीले त यो बिदाइलार्ई ‘चेर्नोबिल सु’सा’इ’ड मिसन’ सँग जोडेरसमेत हेरे।
एउटा भिडियो फुटेजमा आफन्तहरुले बिदाइका हात हल्लाइरहँदा उपस्थित भीडमा सबैजना भा व वि ह्व ल देखिन्छन्। सबैका आँखा टिलपिल देखिन्छन्। उनीहरु सुँक्सुकाइँरहेका छन्। एक अर्कालाई क से र अँगालोमा बाँधिएका देखिन्छन्। कोरोना भाइरसको त्रा’समा रहेका मानिसहरु कसरी हाँसीखुसी बिदाइ गर्न सक्लान् र?
सन् १९८६ मा युक्रेनमा भएको विश्वकै सबैभन्दा भ’या’न’क आणविक दु’र्घ’ट’नाको रुपमा लिइन्छ। त्यतिबेला न्युक्लियर रियाक्टर पड्किँदा त्यसको निकै असर परेको थियो। त्यहाँफायरफाइटर पठाइँदा उनीहरुलाई पनि केमिकल रियाक्सनले असर गरेको थियो। वुहानको कोराना भाइरसको संक्रमितको उपचारका लागि जाने मेडिकल स्वयंसेवकहरुलाई कोरोना भाइरस सु सा इ ड मिसनको रुपमा व्याख्या गरिँदैछ।
अमेरिकी नेता सोलोमन युले भिडियो ट्वीट गरेका छन् जसमा बस र रेलमा रहेका आफ्ना आफन्तहरुलाई रुँ’दै बिदाइ गरेको देखिन्छ। युले ट्वीटमा भनेका छन्– ‘चेर्नोबिल फायरफाइटरजस्तै केही चिकित्सक तथा नर्सहरु पनि आफ्नो घर फर्कने छैनन्। यो उनीहरुका लागि कोरोना भाइरस सु सा इ ड मिसन हो, उनीहरुलाई ईश्वरले रक्षा गरुन्।’
चाइना सेन्ट्रल टेलिभिजनमा सियानका एक चिकित्सकलाई श्रीमतीसँगको अन्तिम ब्रेक’फास्ट भनेर एक भिडियोमा देखाइएको छ। उनी वुहान जान लागेका छन्। ४४ वर्षे डा. लि यु सियान जाउटङ युनिभर्सिटीका प्रमुख फिजिसियन हुन्। उनकी श्रीमतीझाउ जिङ नर्स हुन्। साउका अनुसार उनका श्रीमान २००३ मा फैलिएको सार्सको म’हा’मा’रीमा पनि खटिएका थिए।
डा. लि भन्छन्, ‘यदि तपाईंलाई रोगको बारेमा राम्रो जानकारी भएन भने डरलाग्दो हुन्छ। मैले यसबारेमा राम्ररी बताए अनि श्रीमतीलाई सम्झाउन सके‌ं।’ झाउ भन्छिन् म अझै पनि ड रा ए की नै छु। डा. युलाई बुबाले भिडियो कलमार्फत शुभकामना पनि दिएका छन्। आफ्नो ख्याल राख्नका लागि आग्रह गरेका छन्।
चीनमा फैलिरहेको नयाँ कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल निम्त्याएको विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले घोषणा गरेको छ ।चीन हुँदै अन्य देशमा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन थालेपछि डब्लूएचओले विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरेको हो ।
‘यो घोषणाको मुख्य कारण चीनमा के भइरहेको छ भन्ने होइन कि अन्य देशमा के भइरहेको छ भन्ने हो,’ विश्वव्यापी स्वास्थ्य आपतकाल घोषणाबारे डब्लूएचओका प्रमुख टेड्रोस एड्हानाेमले भने ।
बिभिन्न भाइरसका संक्रमणले विश्वव्यापी संकट निम्ताएपछि डम्बलुएचओले आ प त का ल घोषणा गर्ने गरेको छ । यसअघि पाँच पटकसम्म आपतकाल घोषणा गरिसकिएको बीबीसीले जनाएको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली रहेका मुलुकमा कोरोना भाइरस फैलनसक्ने त्रा’स रहेको भन्दै चि न्ता व्यक्त गरेको छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, कोरोना भाइरसका कारण चीनमा हालसम्म कम्तीमा २१३ जनाको ज्या न गइसकेको छ । चीनसहित विश्वका अन्य १८ देशमा पनि यसका बिरामी भेटिएका छन् । चीनको वुहान सहरको यात्रा गर्नेहरुमा यो भाइरस फेला परेको छ । यद्यपि, चीनबाहिर ९८ जनामा यस्तो सं क्र म ण भेटिए पनि मृ त्यु भने भएको छैन ।